လေမများဘဲ လက်တွေ့လုပ် သွားတဲ့ အီသီယိုးပီးယား ရဲ့ ကိုဗစ်ကာလ သင်ကြားရေးစနစ် – Let Pan Daily
အသကျ ၃၀ က�...
လေမများဘဲ လက်တွေ့လုပ် သွားတဲ့ အီသီယိုးပီးယား ရဲ့ ကိုဗစ်ကာလ သင်ကြားရေးစနစ်
ကန့်လန့်တိုက်၊ ဖောင်းထု၊ စားဖားတွေနဲ့ လေတွေ များမနေဘဲ လက်တွေ့ကျကျလုပ်သွားတဲ့ အီသီယိုးပီးယား ရဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလ ပညာရေးသင်ကြားရေးစနစ်
အီသီယိုးပီးယား ဆိုတဲ့ နိုင်ငံလည်း ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ဘေးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပဲ။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်လာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး သတိထား ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်လိုက်ရတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ (UNESCO) ကလည်း ဧပြီလက ကြေညာ တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး 1.6 Billion စာသင်ကြားရေးတွေ ရပ်ဆိုင်းကုန်ပြီတဲ့။ ကျောင်းတွေ ပိတ်လိုက်ရတာကြောင့် ကလေး ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်နှုန်းလောက် သင်ကြားရေးနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားရပြီတဲ့လေ။
အီသီယိုးပီးယားမှာ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကတည်းက ကျောင်းတွေ စပိတ် တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကျောင်းတက် ပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ အတန်းစုံကျောင်းသားပေါင်း ၂၅ သန်းကျော်ရှိတယ်။ သူတို့ အားလုံး အိမ်ထဲကအိမ်ပြင် မထွက်နိုင်တဲ့ အနေအထားကိုရောက်နေတော့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ စဉ်းစားရတယ်။ ဒီကလေးတွေ ပညာရေး ဘယ်လို လုပ်ပေးရမလဲပေါ့။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးနေပါတယ်ဆိုပေမယ့် ဆင်းရဲ တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်က ကလေးတွေ အရမ်းဆင်းရဲကြတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာသင်ဖို့ကိစ္စမှာ တန်းတူညီမျှ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ အစိုးရကလည်း စဉ်းစားရတယ်။ ကျေးလက်မှာရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် တတ်မြောက် မှုနှုန်း၊ အသုံးပြု နိုင်စွမ်း၊ အသုံးပြုစရာပစ္စည်း ဘာမှပြည့်စုံအောင် မရှိဘူး။
အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် သင်ကြားမှုတွေ လုပ်ရင် ကျေးလက်က လူတွေ အခွင့်အရေး ရနိုင်ပါ့မလားမြို့ပြတွေမှာပဲ ရေဒီယို၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတာ။ ကျေးလက်မှာ ရေဒီယိုလောက်ပဲ အမြင့်ဆုံး သုံးနိုင်ကြတာ။ အွန်လိုင်းကနေ ပို့ချမယ်၊ လေလှိုင်းကနေ ပို့ချမယ်ဆိုရင် ကျေးလက် ကပြည်သူတွေ အခွင့်အရေး ရပါ့မလား။
အစိုးရပဲ ဒီအချက်ကို စဉ်းစားတာပေါ့။ ကျေးလက် မှာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေရင် ဘာရောဖြစ်လာမှာလဲ? အီသီယိုးပီးယား ပညာရေးဝန်ကြီးက တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကတိပေးတယ်။
ကျေးလက်ရော မြို့ပြမှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေ မပူပါနဲ့။ အားလုံးအတွက် ပညာရေးကို ဆက်လက်လေ့လာသင်ကြားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်တော့ မထွက်ကြပါနဲ့ပေါ့။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကျောင်းသားတွေ ကွန်ပျူတာ ကျောင်းသား တိုင်း မကိုင်ဖူးပါဘူး။ ကျေးလက်ကဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ပညာရေးဝန်ကြီးက ဘာပြောသလဲ “ကျွန်တော်တို့ ရှိတာနဲ့ စရအောင်”
ကျေးလက်မှာ ဘာရှိသလဲ။ ရေဒီယိုလောက်တော့ အနည်းဆုံး ရှိတယ်။ တီဗီတွေလည်း ရှိတဲ့ရွာတွေမှာ ရှိတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးက ရေဒီယို ပို့ချချက်နဲ့ တီဗီပို့ချချက်တွေကို နှစ်မျိုးခွဲတယ်။ မူလတန်းအဆင့် ကလေးတွေအတွက် ရေဒီယို ပို့ချချက်တွေကို နားထောင်ကြပါ။ အလယ်တန်း အထက်တန်း အဆင့်ကျောင်းသားတွေက တီဗီကြည့်ကြပါ ပေါ့။
အီသီယိုးပီးယားမှာ လူဦးရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဟာ ကျေးလက်မှာ နေကြတာ။ လျှပ်စစ်မီးမရှိ၊ ရှိတဲ့ ရွာတွေမှာ လည်း အချိန်ပိုင်းလောက်ပဲ ရတယ်။ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ကြားတောင် မကြားဘူးတဲ့ရွာတွေ အများကြီး။ အားလုံကို လိုက်တွက်ပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုကာ မစရင် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
“ကျွန်တော်တို့ ရတဲ့နေရာက စရအောင်” ရေဒီယိုရှိတဲ့ သူတွေ ရေဒီယိုနားထောင်။ တီဗီရှိတဲ့သူတွေ တီဗီဖွင့်ကြည့်။ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်ရတဲ့သူတွေ ရတာနဲ့ အခွင့်အရေးယူ “ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် မဟုတ်တောင် လိုချင်တဲ့သူတွေနဲ့ စရအောင်”
မြို့ပြမှာနေတဲ့ ဆရာတွေကို စုလိုက်တယ်။ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်တွေ သုံးပြီးတော့ စာတွေဘယ်လိုသင်မလဲ ဝိုင်းတွေးကြ၊ ဝိုင်းစဉ်းစားကြတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးက မြို့ပြနေ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာတွေနဲ့ သူတို့အင်အား၊ အကြံဉာဏ်အားကိုယူပြီးတော့ စတယ်။ အားလုံးစုဝေးပြီးတော့ အင်တာနက်ထဲကနေ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပို့ချချက်တွေ ကို အတုယူတယ်။ ပြုစုတယ်။ နိုင်ငံမှာ သင်လို့ရအောင် ဝိုင်းဝန်းကြံဆောင်တယ်။
“ဆရာတို့ ဆရာမတို့ လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေက စရအောင်” နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး အတွက်ပဲ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး အော်မနေဘူး။ တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူတွေက ဖော်ဆောင်၊ မတတ်သေး သူတွေက သင်ကြား ဒီလိုပဲ ပညာကို ပွားနိုင်အောင် ကြိုးစားကြတာ။ ခုဆိုရင် ရေဒီယို ပို့ချချက်တွေနဲ့ တီဗီလိုင်းတွေက ပို့ချချက်တွေ အတော်များများ ထုတ်လွှင့်နိုင်တာကြောင့် ပျော်နေကြပြီ။
ပညာရေး ဝန်ကြီးက ဘာကို တာဝန်ခံ ထားသလဲ
(၁) ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်ဆိုင်း ခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးအတွက် သင်ကြားနေတဲ့ အပိုင်းက ရသလောက် သင်ပါ့မယ်။ သင်ယူမှု မရရှိတဲ့ ကျေးလက်တွေလည်း မပူပါနဲ့။ အခြေအနေကောင်းရင် ဖြည့်စွက် အထူးသင်ကြားမှုတွေ လုပ်ပေးမယ်
(၂) ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တာနဲ့ ပို့ချချက်တွေ ကို ရေဒီယို၊ ရုပ်သံတွေကတစ်ဆင့် ရယူပြီးသူတွေရော၊ မရယူနိုင်သေး သူတွေပါ အားလုံးတန်းတူဖြစ်စေရမယ်
(၃) နောင်လာမယ့် အနာဂတ်မှာလည်း ဒီလို ပြဿနာ နဲ့ ကြုံလာတိုင်း မိဘ၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသား အင်အားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အတူတူ လက်တွဲဖြေရှင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်
ကျွန်တော်တို့က အီသီယိုးပီးယားဆိုရင် ဆင်းရဲ ငတ်ပြတ်၊ ပိန်ခြောက်အားငယ် သနားစရာလို့ မြင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီသီယိုးပီးယားဆိုတာ စိတ်ဓာတ် နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ သိသူရှားတယ်။
ကနျ့လနျ့တိုကျ၊ ဖောငျးထု၊ စားဖားတှနေဲ့ လတှေေ မြားမနဘေဲ လကျတှကေ့ကြလြုပျသှားတဲ့ အီသီယိုးပီးယား ရဲ့ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာလ ပညာရေးသငျကွားရေးစနဈ
အီသီယိုးပီးယား ဆိုတဲ့ နိုငျငံလညျး ကိုဗဈ ၁၉ ကပျဘေးကို ရငျဆိုငျခဲ့ရတာပဲ။ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဖွဈလာတော့ တဈနိုငျငံလုံး သတိထား ကြောငျးတှကေိုလညျး ပိတျလိုကျရတယျ။
ကုလသမဂ်ဂ (UNESCO) ကလညျး ဧပွီလက ကွညော တယျ။ တဈကမ်ဘာလုံး 1.6 Billion စာသငျကွားရေးတှေ ရပျဆိုငျးကုနျပွီတဲ့။ ကြောငျးတှေ ပိတျလိုကျရတာကွောငျ့ ကလေး ၁၀ ယောကျမှာ ၉ ယောကျနှုနျးလောကျ သငျကွားရေးနဲ့ အဆကျအသှယျ ပွတျသှားရပွီတဲ့လေ။
အီသီယိုးပီးယားမှာ မတျလ ၁၆ ရကျနကေ့တညျးက ကြောငျးတှေ စပိတျ တယျ။ တဈနိုငျငံလုံးမှာ ကြောငျးတကျ ပညာသငျကွားနကွေတဲ့ အတနျးစုံကြောငျးသားပေါငျး ၂၅ သနျးကြျောရှိတယျ။ သူတို့ အားလုံး အိမျထဲကအိမျပွငျ မထှကျနိုငျတဲ့ အနအေထားကိုရောကျနတေော့ နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျတှေ စဉျးစားရတယျ။ ဒီကလေးတှေ ပညာရေး ဘယျလို လုပျပေးရမလဲပေါ့။
အီသီယိုးပီးယားနိုငျငံဟာ ဖှံ့ဖွိုးနပေါတယျဆိုပမေယျ့ ဆငျးရဲ တဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိသေးတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကြေးလကျက ကလေးတှေ အရမျးဆငျးရဲကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပညာသငျဖို့ကိစ်စမှာ တနျးတူညီမြှ ဖွဈနိုငျပါ့မလားလို့ အစိုးရကလညျး စဉျးစားရတယျ။ ကြေးလကျမှာရှိနတေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ ဒဈဂဈြတယျ တတျမွောကျ မှုနှုနျး၊ အသုံးပွု နိုငျစှမျး၊ အသုံးပွုစရာပစ်စညျး ဘာမှပွညျ့စုံအောငျ မရှိဘူး။
အှနျလိုငျးကတဈဆငျ့ သငျကွားမှုတှေ လုပျရငျ ကြေးလကျက လူတှေ အခှငျ့အရေး ရနိုငျပါ့မလားမွို့ပွတှမှောပဲ ရဒေီယို၊ တီဗီ၊ ကှနျပြူတာ၊ အငျတာနကျသုံးနိုငျတဲ့သူတှရှေိတာ။ ကြေးလကျမှာ ရဒေီယိုလောကျပဲ အမွငျ့ဆုံး သုံးနိုငျကွတာ။ အှနျလိုငျးကနေ ပို့ခမြယျ၊ လလှေိုငျးကနေ ပို့ခမြယျဆိုရငျ ကြေးလကျ ကပွညျသူတှေ အခှငျ့အရေး ရပါ့မလား။
အစိုးရပဲ ဒီအခကျြကို စဉျးစားတာပေါ့။ ကြေးလကျ မှာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုပွီး ဘာမှမလုပျပဲ ထိုငျနရေငျ ဘာရောဖွဈလာမှာလဲ? အီသီယိုးပီးယား ပညာရေးဝနျကွီးက တဈနိုငျငံလုံးကို ကတိပေးတယျ။
ကြေးလကျရော မွို့ပွမှာ ရှိနတေဲ့ ပွညျသူတှေ မပူပါနဲ့။ အားလုံးအတှကျ ပညာရေးကို ဆကျလကျလလေ့ာသငျကွားနိုငျအောငျ စီစဉျပေးပါ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ အိမျထဲက အိမျပွငျတော့ မထှကျကွပါနဲ့ပေါ့။
အီသီယိုးပီးယားနိုငျငံကြောငျးသားတှေ ကှနျပြူတာ ကြောငျးသား တိုငျး မကိုငျဖူးပါဘူး။ ကြေးလကျကဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ပညာရေးဝနျကွီးက ဘာပွောသလဲ “ကြှနျတျောတို့ ရှိတာနဲ့ စရအောငျ”
ကြေးလကျမှာ ဘာရှိသလဲ။ ရဒေီယိုလောကျတော့ အနညျးဆုံး ရှိတယျ။ တီဗီတှလေညျး ရှိတဲ့ရှာတှမှော ရှိတယျ။ ပညာရေးဝနျကွီးက ရဒေီယို ပို့ခခြကျြနဲ့ တီဗီပို့ခခြကျြတှကေို နှဈမြိုးခှဲတယျ။ မူလတနျးအဆငျ့ ကလေးတှအေတှကျ ရဒေီယို ပို့ခခြကျြတှကေို နားထောငျကွပါ။ အလယျတနျး အထကျတနျး အဆငျ့ကြောငျးသားတှကေ တီဗီကွညျ့ကွပါ ပေါ့။
အီသီယိုးပီးယားမှာ လူဦးရေ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ဟာ ကြေးလကျမှာ နကွေတာ။ လြှပျစဈမီးမရှိ၊ ရှိတဲ့ ရှာတှမှော လညျး အခြိနျပိုငျးလောကျပဲ ရတယျ။ ကှနျပြူတာ အငျတာနကျ ကွားတောငျ မကွားဘူးတဲ့ရှာတှေ အမြားကွီး။ အားလုံကို လိုကျတှကျပွီး မဖွဈနိုငျပါဘူးဆိုကာ မစရငျ ဘာမှ ဖွဈလာမှာ မဟုတျဘူး။
“ကြှနျတျောတို့ ရတဲ့နရောက စရအောငျ” ရဒေီယိုရှိတဲ့ သူတှေ ရဒေီယိုနားထောငျ။ တီဗီရှိတဲ့သူတှေ တီဗီဖှငျ့ကွညျ့။ ကှနျပြူတာ အငျတာနကျရတဲ့သူတှေ ရတာနဲ့ အခှငျ့အရေးယူ “ကြှနျတျောတို့ အားလုံးအတှကျ မဟုတျတောငျ လိုခငျြတဲ့သူတှနေဲ့ စရအောငျ”
မွို့ပွမှာနတေဲ့ ဆရာတှကေို စုလိုကျတယျ။ ကှနျပြူတာ အငျတာနကျတှေ သုံးပွီးတော့ စာတှဘေယျလိုသငျမလဲ ဝိုငျးတှေးကွ၊ ဝိုငျးစဉျးစားကွတယျ။ ပညာရေးဝနျကွီးက မွို့ပွနေ တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာတှနေဲ့ သူတို့အငျအား၊ အကွံဉာဏျအားကိုယူပွီးတော့ စတယျ။ အားလုံးစုဝေးပွီးတော့ အငျတာနကျထဲကနေ ပညာရေးဆိုငျရာ ပို့ခခြကျြတှေ ကို အတုယူတယျ။ ပွုစုတယျ။ နိုငျငံမှာ သငျလို့ရအောငျ ဝိုငျးဝနျးကွံဆောငျတယျ။
“ဆရာတို့ ဆရာမတို့ လုပျနိုငျတဲ့သူတှကေ စရအောငျ” နိုငျငံရဲ့ ပညာရေး အတှကျပဲ။ မဖွဈနိုငျပါဘူးဆိုပွီး အျောမနဘေူး။ တတျကြှမျးတဲ့ သူတှကေ ဖျောဆောငျ၊ မတတျသေး သူတှကေ သငျကွား ဒီလိုပဲ ပညာကို ပှားနိုငျအောငျ ကွိုးစားကွတာ။ ခုဆိုရငျ ရဒေီယို ပို့ခခြကျြတှနေဲ့ တီဗီလိုငျးတှကေ ပို့ခခြကျြတှေ အတျောမြားမြား ထုတျလှငျ့နိုငျတာကွောငျ့ ပြျောနကွေပွီ။
ပညာရေး ဝနျကွီးက ဘာကို တာဝနျခံ ထားသလဲ
(၁) ကိုဗဈကွောငျ့ ရပျဆိုငျး ခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးအတှကျ သငျကွားနတေဲ့ အပိုငျးက ရသလောကျ သငျပါ့မယျ။ သငျယူမှု မရရှိတဲ့ ကြေးလကျတှလေညျး မပူပါနဲ့။ အခွအေနကေောငျးရငျ ဖွညျ့စှကျ အထူးသငျကွားမှုတှေ လုပျပေးမယျ
(၂) ကြောငျးတှပွေနျဖှငျ့တာနဲ့ ပို့ခခြကျြတှေ ကို ရဒေီယို၊ ရုပျသံတှကေတဈဆငျ့ ရယူပွီးသူတှရေော၊ မရယူနိုငျသေး သူတှပေါ အားလုံးတနျးတူဖွဈစရေမယျ
(၃) နောငျလာမယျ့ အနာဂတျမှာလညျး ဒီလို ပွဿနာ နဲ့ ကွုံလာတိုငျး မိဘ၊ ဆရာ၊ ကြောငျးသား အငျအားတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး အတူတူ လကျတှဲဖွရှေငျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားမယျ
ကြှနျတျောတို့က အီသီယိုးပီးယားဆိုရငျ ဆငျးရဲ ငတျပွတျ၊ ပိနျခွောကျအားငယျ သနားစရာလို့ မွငျခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အီသီယိုးပီးယားဆိုတာ စိတျဓာတျ နဲ့ ရပျတညျနတေဲ့ နိုငျငံဆိုတာ သိသူရှားတယျ။
ဘဏ် က ATM စက်ကို ၀င်ခိုးနေတဲ့ ဘဏ် သူခိုးမျောက်
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှု ဒဏ် စတင် ခံစားနေရပြီ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည်
အထာကကြ ကောကျကွောငျး အလှတှေ နဲ့ ပိုဈ့ပေးကွမျး နတေဲ့ အိခြောပို ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ဘရာ မပါတဲ့ အလနျးစား ပုံရိပျတှေ နဲ့ ပုရိသတှေ ရဲ့ အသညျးကို ခွှခြေ လိုကျ ပွနျတဲ့ မကျြဝနျး
ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အလှတရားတှေ ပျေါလှငျ နလေောကျအောငျ အမိုကျစား TIK TOK ဆော့ပွ လိုကျတဲ့ G
ဂီတာရှိတျလေးလို အခြိုးအစား ကလြှနျးတဲ့ အဖုအထဈလေးတှကေ ရငျဖို လှိုကျမောဖှယျ ညို့အား ပွငျးနတေဲ့ နှယျနှယျထှနျး